Doka ara-tsosialy mamorona hamonjy ny planeta | Famoronana an-tserasera
La doka famoronana sosialy hamonjy ny planeta dia fitaovana tsara ho fitaovana mahatratra olona maro mampiasa dokam-barotra Amin'ny maha mpiara-miasa azy, ny dokam-barotra dia tsy isalasalana fa mahavita mamadika ny hafatra ara-tsosialy ho zavatra manintona kokoa sy manaitra, ka mahatonga azy ireo tanjona ekolojika mahazo hery amin'ny alàlan'ny kanto.
Fantaro ny fomba azonao manambatra ny kanto / famolavolana / dokam-barotra miaraka amin'ny lafin-javatra ara-tsosialy izay mitady hanilika ny hevitra hivarotra vokatra nefa asehoy anay ny zava-misy eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny famoronana. Fanentanana maintso isan-karazany hanentanana ny saina momba ny olana misy ankehitriny mifandraika amin'ny fonenantsika, planeta Tany.
Nampiasaina hatrany ny doka mba hivarotana anay vokatra vaovao amin'ny alàlan'ny rafitra sy fomba samihafa hahatratrarana ny mpampiasa, famoronana sy ny kanto miaraka amin'ny dokam-barotra nomen'izy ireo an'ity haitao ity vahaolana mamorona tokoa miaraka amina fisarihana lehibe mankany amin'ny mpampiasa noho ny heriny hita maso miavaka.
Manomboka amin'ny fivarotana vokatra ka hatramin'ny fivarotana hevitra
Atsipinay ny hevitra amin'ny fivarotana vokatra ary mifantoka amin'ny hevitra fivarotana / fampitana andian-kevitra izahay amin'ity tranga ity hevitra ekolojika sy sosialy fa hampiasa dokam-barotra amin'ny fomba fanaon'ny orinasa izy ireo fa mieritreritra ny hanatratra ny mpampiasa tsy hivarotra ny maodelin'ny fiara farany an'io marika io fa ampianaro anao momba ny fihetsika iray. Betsaka ny fanentanana izay tanterahina antony manosika ara-tsosialy isan-karazany, avy amin'ny miady amin'ny homamiadana mandra-panavotana ala avy amin'ny fianjerana tsy an-kanavaka.
Ao amin'ilay tolo-kevitra hitantsika ery ambany izay atrehantsika sary be famoronana miaraka amin'ny valiny sary tsy misy kilema. Mba hahatakarana bebe kokoa ny sary tokony hanontanianao anay inona ny olana tianao ampitainaAmin'ity tranga ity dia ny fanapahana hazo no lohahevitra. fantatro mampifandray ny ain'ny olombelona (havokavoka) amin'ny ala mampiseho ny fomba nanapahana ireo hazo ary vokatr'izany dia nanimba ny havokavokay.
Iray amin'ireo fikambanana misongadina indrindra ao ny fampiasana ny doka ho fitakiana hahatratra olona maro kokoa dia ny WWF. Amin'ny alàlan'ny tolo-kevitra sary mamorona no asehon'izy ireo ny karazana tena olana amin'ny fomba toy izany mitady hamorona fiaraha-miory sy hampihen-danja ny mpampiasa alohan'ity karazana olana ara-tontolo iainana ity.
Ao amin'ny sary etsy ambany dia hitantsika ny fomba famolavolana WWF doka mifanaraka amin'ny fotoana Mostrando ny herin'ny media sosialy ary ny fahefana ananany hahazoana fanohanana amin'ireo karazana antony ireo. Ilay hafatra iray ihany dia adika amin'ny fomba famoronana ary, amin'ity tranga ity, fomba ara-pientanam-po.
Another of the solontena lehibe ho mpiaro ny planeta dia ny fandaminana Greempeace, izy ireo koa mampiasa endrika sy dokam-barotra izy ireo ho fitaovana hanatratra mpampiasa bebe kokoa.
Afaka mahita isika a fanentanana fanentanana antso mahaliana "Ireo olon-dratsy amin'ny toetrandro" ny ataon'ity fampielezan-kevitra ity dia ny fampisehoana amin'ny mpampiasa ny olan'ny fitantanana tsy mety manoloana ny olan'ny tontolo iainana olona roa tapa-kevitra. Afaka mahita ireo sary isika ary mitsara raha marina izany na tsia.
Mangataka ny mpampiasa hifidy ny hetsika iza no olon-dratsy ratsy indrindra amin'ny toetrandro. Raha te-hifidy ny olon-dratsy tianao ianao dia mila miditra ao fotsiny tranonkala.
Nasehon'izy ireo endri-tsoratra roa tena izy ary roa hafa tsy tena izy ao anatin'ny fampielezan-kevitra.
Amin'ity tranga ity dia ny fiteny taloha ampitao ny hafatra ara-tsosialy dia ny sary, asehon'izy ireo antsika sary manaitra izaitsizy miaraka hevitra tena manavao sy manintona, tsy misy isalasalana fa tetikasa famoronana lehibe misy fototra ara-tsosialy mafy orina izy io.
Ny dokam-barotra dia afaka ny ho mpiara-miasa lehibe amintsika rehefa mitady ny hanandrana ny antony hahatratra tontolo tsara kokoa ho an'ny rehetra. Ny dokam-barotra, ny zavakanto ary ny famolavolana dia mifandraika amin'ny mahazo manova an'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Doka ara-tsosialy mamorona hanavotana ny planeta
Ity ny CDay, andro eritreretin'ny mpamorona